Accueil > Gazetin'ny nosy > INTY NDAY : Hopotehina mihitsy ve ity firenena ity e ?
INTY NDAY : Hopotehina mihitsy ve ity firenena ity e ?
Mandray anjara amin’ny fikaonan-doha ara-toekarena any Londres, Renivohitr’i Angletera ankehitriny ny Filohampirenerna Rajaonarimampianina sy ireo solontenam-panjakana malagasy miara-dia aminy any. Isan’ny teboka hivoitra ao, hono, ny tontolon’ny harena an-kibon’ny tany sy ny sehatra ny angovo.
Mazava ho azy fa ny fitrandrahana harena eto sy ny famokarana angovo (herin’aratra) no fototr’izany.
Tsy olana amin’izao ary tsy fondro amin’izao aloha ny fiheverana toa izany, ary ny tena tarigetran’ny fitondrana amin’izao fikaonan-doha ara-toekarena izao dia ny hisintonana an’ireo mpandraharaha mpampiasa vola anglisy ho avy hanangana orin’asa momba izany eto.
Voalohany indrindra aloha, aoka tsy ho be famaritra toa rambon’osy isika ka lanitra tsy hilatsaka no tohanana, fa tsy manaitra loatra ny mpandraharaha anglisy loatra izany Madagasikara izany. Asa anefa, manana fahaizana manokana momba izany angamba ny Filoha Rajaonarimampianina.
Fa momba ny foto-kevi-dehibe tsy azo andeferana momba izany foto-dia na lohahevitra hahazo vahana amin’nyfikaonan-doha ara-toekarena izany no tiana hasiana fanamarihana kely mba hahafahana mifampifehy koa raha ilaina.
Hatramin’izao aloha dia mpampiasa vola « saron-tava » no voasariky ny mpitondra nifandimby teto fa ny fandrobana ny harem-pirenenantsika mahamaika an-dry zareo eto.
Hitantsika amin’ireo zava-misy ankehitriny izany, ary misy amin’izy ireny no efa tamin’ny fanjanahan-tany, ao ny tamin’ny Repoblika voalohany, ary ny taty aoriana dia vao mainka mihamahazo vahana.
Vao omalin’ny omaly, ohatra, no nahafantarana fa fiaramanidina helikaoptera iray, efa intelo sahady tamin’iny herinandro lasa iny no tonga nitatitra volamena tao Betsiaka Ambilobe, ka olona akaiky an’Ingahy Filoha amperin’asa no miara-miombona antoka amin’ireo vahiny avy any ivelany amin’izany.
Vao omalin’ny omaly koa no nivoaka ny fanadihadiana fa ny 45%-n’ny safira mitobaka eo amin’ny tsenam-batosoa iraisam-pirenena dia avy aty Madagasikara, ka ambony karazana mihitsy izany na eo amin’ny habeny na eo amin’ny hatsaran’ny kalitaony. Dia tsy menatra isika amin’izany raha ny mpitondra antsika mandady miankohoka mitady vola hozanahina amin’ny anaran’io Madagasikara sy ny vahoaka malagasy any ivelany, izay zara raha mahazo 30 tapitrisa Euros, ohatra. Vao omaly koa no fantatra fa nahatratra 1.000 tapitrisa dôlara (1 miliara dôlara) isa-taona ny sandan’ny harena an-dranomasina avy ao amin’ny fari-dranomasina Atsimo Andrefana ao no miondrana an-tsokosoko, tsy manaraka ny lalàna velona. Ny dikan’izany ange dia very tsy misy miditra ao amin’ny kitapom-panjakana e !
Ny minisitra ny Harena an-kibon’ny tany amin’izao fotoana koa dia mahagaga fa te hanadio tena fotsiny ka manilika ny rihitra any amin’ny teo aloha, dia milaza fa « ny 90%-n’ny fahazoan-dalana hizaka manana faritra misy harena an-kibon’ny tany eto (permis minier) dia ireo mpanera sy mpijirika no mitana azy ».
Ka inona ihany izany no andraikitra ny fitondrana ankehitriny e ? Ianareo izao no eo ka inona no nataonareo hanitsiana na hamongorana izany ? Ny marina dia manohy ny famotehana ny firenena malagasy fotsiny ianareo sy ny talohanareo rehetra.